← Interview with U Win Tin – Leader for the people, by the people and of the people	Cartoon Win Pe : excuse me! →	Maung Maung One – Recognize	08
ကျနော် အရင်က အသိအမှတ်ပြုခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ စိတ်ခွန်အားသတ္တိကို သိပ် သဘောပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ တရားတော်တွေကို စာအုပ်စာပေတွေကနေ ဖတ်ရှုရတဲ့ အခါရောက်မှ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ တကယ်တော့ အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာ စိတ်သတ္တိရှိမှ လုပ်ရဲတဲ့အလုပ် တဲ့၊ သိပ်မှန်လိုက်တဲ့စကားဗျာ။ ကျနော့်ဘဝမှာ ဒီအယူအဆလေးက အတော်ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တယ်။ အတိတ်ကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အတော် ရှက်စရာကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ စိတ်အစဉ်တွေကို ပြေးမြင်မိတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ မကောင်းတာများကိုသာ အသိအမှတ်ပြုဖို့ ဝန်မလေးတတ်ကြပေမယ့်လို့ ကောင်းကွက်တွေကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ကြ အတော်ဝန်လေးတတ်ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒါဟာ သာမန်စိတ်ပါ၊ လူတယောက်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက် တော်ကွက်တွေကို အသိမှတ်အပြုဖို့ဆိုတာ အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်တယ်။ ဆရာတော်ပြောသလို စိတ်ခွန်အားစိတ်သတ္တိတွေ လိုတယ်။ ကျနော် ဒီအမှန်တရားကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်တယ်။ ကျနော် အင်္ဂလိပ်စာ ကျူရှင်ဆရာတယောက် အဖြစ်ရပ်တည်တော့ စာတော်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း အပိုအလိုမရှိ အသိအမှတ် ပြုကြည့်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကျောင်းသားတွေဟာ ပိုပိုပြီးတော်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်း စေတနာရှေ့ထား ထောက်ပြတယ်။ ကျောင်းသားတွေဟာ လိုလိုလားလား ခံယူပြီး ကြိုးစားလာတာကိုတွေ့ရတာ အမှန်ပါ။ ဒါကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးရလာဒ်လို့ ခံယူမိတယ်။ အပြင်လောက လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာလည်း ကျင့်သုံးကြည့်တယ်။ အဲဒီလို အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကို ခင်မင်လေးစားလာတာ လက်တွေ့ပါ။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ပေးပါလို့ပြောတာ – နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ပုဒ်မ အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး ထောင်ချထားသောသူများကို ဆိုလိုတာ။ ဒါကို ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား မရှိပါဘူးဆိုတာ အသိအမှတ်ပြုဖို့ စိတ်ခွန်အားနည်းနေတဲ့အရာလို့ပဲ စွပ်စွဲချင်တယ်။ အသိအမှတ်ပြုဖို့ကိုတောင်မှ ဝန်လေးနေတယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်သွားမယ့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုတာကို ဘယ်လိုလှမ်းကြမလဲ။ စစ်အာဏာရှင်အဆက်ဆက်ဟာ သူတို့ စည်းစိမ် အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် တပ်မတော်ကို အသုံးချသွားကြတယ်။ ကျနော်တို့ အတိုက်အခံများဟာ တပ်မတော်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစုကို ခွဲမြင်ဖို့တော့လိုတယ်။
မောင်မောင်ဝမ်း Like this:Like Loading...
← Interview with U Win Tin – Leader for the people, by the people and of the people	Cartoon Win Pe : excuse me! →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...